C/raxmaan C/shakuur oo taageeray tallaabada uu qaaday wasiirka arrimaha gudaha – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan C/shakuur oo taageeray tallaabada uu qaaday wasiirka arrimaha gudaha
Siyaasi C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ahaa musharixiinta ku tartameeysay doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal kooban uusoo dhigay bartiisa Facebooga ku taageeray tallaabadii uu wasiirka arrimaha gudaha xilka uga qaaday xoghayihii joogtada ahaa ee wasaaradda Yaxye Cali Ibraahim.
C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa tallaabadaan uu qaaday wasiirka sabab uga dhigay in sidaan oo kale ay hore uga dhacay dowladii hore, wuxuuna ku taliyay in mudane Yaxye xil kale loo raadiyo, isla markaana ay cudur-daar bixiyaan wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasiirka.
Hoos ka aqriso qoraalka siyaasi C/raxmaan C/shakuur Warsame
Xil ka qaadista uu wasiirka arrimaha gudaha ku sameeyey xoghayaha joogtada waxaa ka dhashay fal-celis aan hanaanka dowladnimo ku haboonayn, sidaan oo kale ayaa wasiirkii ka horeeyey Mudane Odowaa uu digreeto xilka uga qaaday xoghayihii joogta ahaa Dr Ismaaciil Jimcaale, kuna magacaabay xoghaya haatan xilka laga qaaday Mudane Yaxye Cali.
Waxaa ila haboon in wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ay cudur-daar ka bixiyaan hab dhaqanka khilaafsan hannaanka iyo habraaca maamul ee dawliga ah, Mudane Yaxyena xil kale loo raadiyo, sidii la yeelay Dr Jimcaale oo wasaarada cadaalada la geeyay.
Dalka weli xaalad nuglaansho ah ayuu ku jiraa oo tanaasul, kab kab iyo isku keen mudo qaadanaya u bahaan.